သန္ဓေတားခြင်းနှင့်ကလေးမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးမေးခွန်းများကိုဖြေကြားခဲ့သည် - ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး | ဇွန်လ 2022
ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး သတင်း၊ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ပြင်းထန်သောအားကစား ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ကုမ္ပဏီ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကုန်ပစ္စည်း သတင်း ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကျန်းမာရေး
အဓိက >> ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး >> 11 မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုမေးခွန်းများကို - အဖြေ
လိင်မှုဆိုင်ရာတက်ကြွသောအမေရိကန်အမျိုးသမီး ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်သန္ဓေတားနည်းတစ်မျိုးသုံးသည်ဟုအစီရင်ခံတင်ပြသည်ဟုယခုနှစ်အစောပိုင်းကထုတ်ပြန်သောစာရင်းများအရ ယေးလ်ဆေးပညာ ။ တိကျသောကြောင့်၎င်းသည်ကောလာဟလများ၊ လွဲမှားသောအမြင်များနှင့်မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဒဏ္sာရီများကိုရှင်းလင်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
အမျိုးသမီးများသည်သန္ဓေတားနည်းကိုရွေးချယ်သည့်အခါပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်ပတ်သက်သောကြိုတင်အမြင်များသည်သူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်မွေးဖွားခြင်းထိန်းချုပ်မှုကသင့်ကိုကိုယ်အလေးချိန်တက်စေသည့်အပျက်သဘောဆောင်သောသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုကြားခဲ့ရသည်။ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းသည်ကင်ဆာရောဂါကိုတိုးပွားစေပြီးကလေးမွေးဖွားမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အချို့လူများကပင်ဟော်မုန်းများသည်သင့်ကိုရူးသွပ်စေသည်ဟုဆိုကြသည်။
သင်မည်သည့်နေရာတွင်စတင်လေ့လာမည်ဆိုပါကမကောင်းသောအတွေ့အကြုံများနှင့်ထိတ်လန့်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်များအကြောင်း Reddit အနက်ရောင်တွင်းထဲသို့ကျနိုင်သည်။ ထို့နောက်အခြားဖိုရမ်များနှင့်တူညီသောသန္ဓေတားခြင်းအကြောင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ရှုပါ။ ရရှိနိုင်သည့်ရွေးစရာများအနက်ရွေးချယ်မှုတစ်ခု - သင်၏လူနေမှုပုံစံနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကျန်းမာရေးအတွက်သင့်တော်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်၎င်းထက် ပို၍ ခက်ခဲသင့်သည်။
အတိုတောင်းသောအဖြေကိုမကပြောပါတယ်Utah တက္ကသိုလ်မှမိသားစုစီမံကိန်းလက်ထောက်ပါမောက္ခ Jen Kaiser ကပြောကြားသည်။ ကြီးမားသောရေကူးကန်လေ့လာမှုများတွင်သင်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်အိုမင်းခြင်းမှသင်ရရှိမည့်အရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလေးချိန်တိုးလာသည်ကိုမတွေ့ရပါ။ ဆိုလိုသည်မှာအမျိုးသမီးအများစုအတွက်မွေးဖွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ဆေးပြားများ၊ မိန်းမအင်္ဂါကွင်းနှင့်သန္ဓေတားဆေးမရှိသည့်အသားအရေများသည်အလေးချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ခြေနည်းသည်။ ပြန်လုပ်ကြစို့: ဟော်မုန်းမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ် သိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေဖို့ ၎င်းသည်ဆရာဝန်၏ပါးစပ်မှဖြစ်ပြီးအပြည့်စုံဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်ဝေခဲ့သည် အတွက် ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်အမျိုးသားစင်တာ ။ လူနာများ၏ ၅% ခန့်တွင်ဖိုက်ဟုခေါ်သောမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ချိန်တွင်အရည်ထိန်းထားနိုင်သည်။ ဤသည်အလေးချိန်သေးငယ်တဲ့အတက်အကျဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သင်ပုံမှန်ကာလရှိလျှင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်တစ်လလျှင်တစ်ရက်ဥတစ်လုံးတည်းလွှတ်သည်။ သို့သော်သင်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သည့်ပြတင်းပေါက်သည် ၂၄ နာရီထက်ပိုကြာသည်။ ကြက်ဥတစ်လုံးသည်မျိုးဥထွက်ပြီးနောက် ၁၂ နာရီမှ ၂၄ နာရီအကြာတွင်သာဓာတ်မြေသြဇာရရှိနိုင်သည် အမေရိကန်ကိုယ်ဝန်အသင်း ။ သုက်ပိုးသည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း၌လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ၃၅ ရက်ကြာနေထိုင်နိုင်သည်။ ကြက်ဥရရှိနိုင်သည့်နေ့အထိ၊ သင်၏အကောင်းဆုံးသော ၀ င်းဒိုးသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅-၇ ရက်အထိဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရရင်သင်တစ်ပတ်လောက်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်။
သဘာဝသံသရာ သည် FDA အတည်ပြုထားသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်မည်သည့်အချိန်တွင် - တစ်လလုံးကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ဖွယ်ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းကိုပိုမိုနားလည်ရန်ဟော်မုန်းကင်းစင်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်း app သည်သုံးစွဲသူများအားအစိမ်းရောင်နေ့လား၊ လရဲ့အနီရောင်ရက်လားဆိုတာနေ့စဉ်ကိုပြောပြသည်။ အနီရောင်နေ့များတွင်အသုံးပြုသူများသည်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်များလာပြီး၊ မစီစဉ်ထားသောကိုယ်ဝန်ကိုကာကွယ်ရန်ကွန်ဒုံးကိုသုံးခြင်းသို့မဟုတ်လိင်မှရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ ဒါဟာ 98% ပြည့်စုံအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်သန္ဓေတားအဖြစ်ထိရောက်သောနှင့် 93 ရာခိုင်နှုန်းပုံမှန်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူထိရောက်သောပါပဲ။
သင်ကိုယ်ဝန်မရရန်အာမခံချက်ကိုလိုချင်လျှင်မဟုတ်ပါ။ သင်၏မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်မှုပုံစံအသစ်သည်အပြည့်အဝထိရောက်မှုရှိရန်တစ်ပတ်ခန့်ကြာနိုင်သည်။ သင်ရွေးချယ်သောသန္ဓေတားဆေး (ဆေးလုံး၊ IUD, implant သို့မဟုတ် Depo-provera ရိုက်ချက်) နှင့်သင်မည်သည့်စက်ဝိုင်းတွင်လက်ရှိရှိနေသည်အပေါ်မူတည်သည်။ ကွန်ဒုံးကိုဆေးသောက်ပြီးခုနစ်ရက်ကြာလျှင်၊ သို့မဟုတ် implants, IUD သို့မဟုတ် shot - ပြီးနောက်သင်ရှင်းသွားလိမ့်မည်။
ကြေးနီ IUD သည်အထူးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်လာသည် စီစဉ်ထားသောမိဘ ။ ကွန်ဒုံးတစ်ခုတည်းကသာ STDs နဲ့ STIs တွေကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာသတိရပါ။
4. ကြေးနီ IUDs သင့်ရဲ့ကာလပိုဆိုးစေသလား
Paragard FDA မှအတည်ပြုပြီးသော US တွင်ရရှိနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောကြေးနီအိုင်အိုင်ဒီသည်အသုံးပြုသူများအတွက်အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည် - ဟော်မုန်းမဟုတ်သော၊ ၁၀ နှစ်အထိကြာရှည်သည်၊ နို့တိုက်နေစဉ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အရေးပေါ်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အကာအကွယ်မပေးသောလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ငါးရက်အတွင်းထိုးထည့်ပါ။ သို့သော်အရသိရသည် Mayo ဆေးခန်း Paragard နှင့်ဆက်စပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအချိန်ကုန်ခြင်း၊ ဤအချက်ကြောင့်အချို့သောအမျိုးသမီးများအတွက်ကြေးနီ IUD သည်မသင့်တော်ပါ။
သငျသညျ, ဆေးလုံးကိုယူပြီးတစ် ဦး implants ရှိခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ရေရှည် IUD သင်အဆင်သင့်သောအခါ - ကိုယ်ဝန်ရရန်ခက်ခဲစေလိမ့်မည်ဟုကြားဖူးတယ်ပေမယ်ဒါကပဲဒဏ္myာရီ။ ဤသန္ဓေတားနည်းသည်ကလေးမွေးချိန်တွင်မွေးဖွားခြင်းကိုသာထိခိုက်သည်။
Dr.Kaiser ကမည်သည့်ပုံစံဖြင့်မွေးဖွားသည်ဖြစ်စေသင်ထိန်းချုပ်မှုကိုမည်မျှကြာအောင်အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေသင်မရပ်စဲခင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ သင်၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခြင်းသည်ကလေးမွေးဖွားမှုမတိုင်မီရှိခဲ့သမျှကိုပြန်သွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အခွင့်အလမ်းကြီးကြီးမားမားရှိခဲ့လျှင်သင်ဆက်လက်ရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ သင်၌အခွင့်အလမ်းနည်းပါးပါကအခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းသို့ပြန်သွားသည်။ ကိုယ်ဝန်ရရန်သင်၏စွမ်းရည်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာအသက်ဖြစ်သည်။ သင်အသက် ၄၀ တွင်ကိုယ်ဝန်ရရန်ကြိုးစားလျှင်၊ သင်အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်ထက် ပို၍ ခက်လိမ့်မည်။
The Mirena နှင့် Skyla IUDs များသည်သင်ရရှိသောကာလအရေအတွက်ကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်လုံးဝရပ်တန့်နိုင်သည်။ အဆိုပါ implants, ဆေးလုံး (အချို့သောလမ်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါ) နှင့်ရိုက်ချက်လည်းသင်ကာလတစ်ခုရှိခြင်းမှတားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ဒီကိစ္စကတကယ်တော့ခင်ဗျားရဲ့မွေးကင်းစကလေးထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းတွေကြောင့်အချိန်ကာလမပြည့်ဖို့လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်သည့်အခါရာသီလာရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုသည် စီစဉ်ထားသောမိဘ ။ ဟော်မုန်းမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်မျိုးဥထွက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးသားအိမ်နံရံတည်ဆောက်ခြင်းကိုတားဆီးသည်။ ဆေးလုံးအထုပ်အကြားသို့မဟုတ်သွေးထဲမှာတွေ့ရသည့်သွေးထွက်ခြင်း ညူ ရုပ်သိမ်းခြင်းသွေးထွက်ခြင်း၊ ဟော်မုန်းများကွာဟမှုကိုတုန့်ပြန်ခြင်း၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ IUD ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသလား။
သင်လုပ်နိုင်သည် - IUD (ဤသည်ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဟုခေါ်သည်) လဲကျနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် (၎င်းကိုဖောက်ခြင်းဟုခေါ်သည်) နေရာမသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကား Mirena or ကဲ့သို့သောကြေးနီသို့မဟုတ်ဟော်မုန်း IUD ကိုရွေးချယ်ရာတွင်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အန္တရာယ်နှစ်ခုဖြစ်သည် Kyleena သည်နှင့်အညီ, သင်၏သန္ဓေတားအဖြစ် ကော်လိုရာဒို၏ဘက်စုံအမျိုးသမီးကျန်းမာရေးစင်တာ ။
ထုတ်ပယ်ခြင်းသည်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်ချေ။ ၎င်းကို IUD အသုံးပြုမှု၏ ၃% ခန့်သာတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ IUD သားအိမ်ကြွက်သားထဲကိုတွန်းပို့တဲ့အခါ Perforation ဆိုတာရှားပါးရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး IUD ထည့်သွင်းမှု ၁၀၀၀ လျှင် ၁ ယောက်ထဲက ၂ ခုမှာသာဖြစ်တတ်သည်။ ၎င်းသည်အန္တရာယ်အရှိဆုံးလည်းဖြစ်သည်။ IUD သည်တင်ပါးဆုံတွင်း၊ ဝမ်းဗိုက်အခေါင်း၊ အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းနှင့်ဆီးအိမ်ဒေသများသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအနည်းငယ်သာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အကယ်၍ IUD သည်သားအိမ်ပြင်ပသို့ရွေ့လျားပါက IUD ကိုခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရမည်။
၈။ ကျွန်ုပ်၏မွေးစာရင်းထိန်းချုပ်ဆေးကိုသောက်ရန်လိုအပ်ပါသလား အတိအကျ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအတူတူ?
ဟုတ်တယ်၊ ဤသည်မည်မျှအရေးကြီးသည်သင်သောက်နေသည့်ဆေးအမျိုးအစားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ များသောအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောသန္ဓေတားဆေးများအမျိုးအစားနှစ်မျိုး - ပေါင်းစပ်ထားသောပါးစပ် contraceptive pill (COC) နှင့်အသေးစားဆေးလုံးသို့မဟုတ် progestin တစ်ခုတည်းသောဆေး (POP) ဖြစ်သည်။ COC သည်မျိုးဥထွက်ခြင်းကိုတားဆီးသောကြောင့်အမှားအတွက်နေရာများစွာရှိသည်။
သို့သော် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း အမေရိကန်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုကောလိပ် (ACOG) ၏အဆိုအရအမျိုးသမီးငယ်သည်ဆေးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါကိုသောက်သုံးနေစဉ်တွင်မျိုးဥထွက်ဆဲဆဲဖြစ်သည်။ ဆေးလုံးသေးသေးလေး၏တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်တစ်ကြိမ်လျှင် ၂၄ နာရီသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနှင့်သားအိမ်နံရံများကိုသာထူစေသည်။ ဒါကြောင့်အဲဒီကာလအတွင်းအခြားဆေးထိုးရှိသည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် (နှင့်အချိန် - အထိခိုက်မခံ) ပါပဲ။
နည်းလမ်းနှစ်ခုလုံးသည်ထိရောက်စွာအသုံးပြုရန်တသမတ်တည်းအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏နေ့စဉ်ဆေးထိုးခြင်းကိုပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်မေ့ခြင်းများကိုရှောင်ရန်အချိန်ဇယားအတိုင်းဆက်လက်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အရေးကြီးတယ်လား။ သင်၏မွေးစာရင်းထိန်းချုပ်မှုသည်သင်၏အခြားဆေးဝါးများအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းသင်၏ဆေးညွှန်းဆရာသို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့်စစ်ဆေးပါ။ အချို့သောပdrugsိဇီဝဆေးများသို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းရမိမှုကိုဆန့်ကျင်သောဆေးဝါးများကဲ့သို့သောပါးစပ်တွင်းရှိသန္ဓေတားဆေးများအားချစ်ခင်စွဲလမ်းမှုအားကောင်းသည့်အလားအလာရှိသည်။ အချို့သော anticoagulant ဆေးများသည်ဟော်မုန်းမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်။
အကောင်းဆုံးကလေးမွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းသည်သင်အတွက်အသုံးဝင်သည်။ ကလေးမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးပုံစံသို့မဟုတ်အလုံးစုံဆုရရှိသူမရှိပါ။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး စီသည်သူမ၊ သူ့နေထိုင်မှုပုံစံနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်မည်သည့်အရာကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရှိသည်။ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးအထူးကု၊ OB / မီးယပ်အထူးကုဆရာ ၀ န်သို့မဟုတ်သင့်မူလစောင့်ရှောက်မှုဆရာဝန်နှင့်ထိုင်။ စကားပြောခြင်းသည်သင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုကျဉ်းမြောင်းစေရန်ကူညီနိုင်သည်။
ဒါကဒဏ္myာရီတစ်ခုပါ။ သုတေသီများသည်ပါးစပ်အတွင်း၌သန္ဓေတားဆေးများတွင်လူတို့၏လိင်ဆက်ဆံမှုဟော်မုန်းများဖြစ်သောအက်စထရိုဂျင်နှင့်ပရိုဂျက်စတွန်များပါ ၀ င်သောကြောင့်ဟော်မုန်းပမာဏပြောင်းလဲခြင်းသည်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်သာမကသားအိမ်နှင့်သားအိမ်ကင်ဆာကိုလည်းကာကွယ်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ကျယ်ပြန့်စွာလေ့လာမှုများအရမွေးဖွားမှုနှုန်းသည်သားအိမ်နှင့်သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်ရင်သားကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ ဒိန်းမတ်အဖွဲ့သည်အမျိုးသမီးထောင်ပေါင်းများစွာ၏လေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကလေးမွေးဖွားခြင်းသည်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုအနည်းဆုံးတိုးစေနိုင်သည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာငါတို့လယ်ပြင်၌အခြားမည်သည့်ကြီးမားသောရေကူးကန်လေ့လာမှုအားဖြင့်ထွက်မခံပါဘူးသေးငယ်တဲ့ပေမယ့်တိုးလာအန္တရာယ်။ ငါသတိရဖို့တစ်ခုခုရဲ့ကြောင်းငါ့လူနာပြောပြပေမယ့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များအဖြစ်ကျနော်တို့သေးပေါ်မှာအလေးချိန်သိပ်မထားဘူး။
ဒီတစ်ခါလည်း, ဒါပေမယ့်သူကတစ် ဦး အမှု -by- ကိစ္စတွင်အခြေခံ, နှင့်သိပ္ပံပconflictိပက္ခဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၁၄ နှစ်အောက်ဒိန်းမတ်အမျိုးသမီးတစ်သန်းကျော်အားလေ့လာမှုပြုခြင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာများစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဆေးညွှန်းမှတ်တမ်းများကဲ့သို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ကျဝေဒနာနှင့်ဆက်နွှယ်မှုမြင့်တက်နေကြောင်းအခိုင်အမာဆိုထားသည်။ အားလုံး ဟော်မုန်းအမျိုးအစား။ သို့သော်အပြည့်အဝဇာတ်လမ်းမဟုတ်ပါဘူး။
ကြီးမားသောလေ့လာမှုအများစုတွင်မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်စိတ်အပြောင်းအလဲများကြားပြင်းထန်သည့်ဆက်နွယ်မှုမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မမြင်ပါ။ သို့သော်လူနာသည်စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့၏စိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းများကိုစိတ်ပူပါကဟော်မုန်းအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမပါရှိသည့်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ ဒါဟာဘုံမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါသူတို့ရဲ့စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူ၎င်းတို့၏တားဆေးကနေအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြုံတွေ့ခဲ့ကြသူလူနာကိုငါမြင်၏။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများအတွက်သင်စိတ်ပူနေလျှင်၊ ဟော်မုန်းမဟုတ်သောဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေရန်လူနာများကိုသူတို့၏အဓိကဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်နှင့်ပူးပေါင်းရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
မင်းမှာစိတ်ကျရောဂါရှိတယ်ဆိုတာသမိုင်းရှိရင်၊f ဟော်မုန်းမွေးဖွားခြင်းထိန်းချုပ်မှုသည်သင့်အတွက်မမှန်ပါ။ ကြေးနီ IUD မှသဘာဝသံသရာအက်ပလီကေးရှင်းအထိအက်ပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည် - သင့်မျိုးဆက်ပွားရွေးချယ်မှုများကိုသင်၏လက်ထဲပြန်ရောက်စေနိုင်သည်။
Cardio Yoga: ဤအွန်လိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းဖြင့်ကြံ့ခိုင်ပါ
nexplanon implant သည်အလုပ်လုပ်ရန်အချိန်မည်မျှကြာသနည်း
အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါအတွက်လက်ခံနိုင်သောသွေးချိုပမာဏ
cv များတွင် flu shot ဘယ်လောက်လဲ
အကာအကွယ်မဲ့ပြီး ၅ ရက်အကြာမှာ planbကိုယူပါ